Jimce, Maarso 15, 2019 Jimce, Maarso 15, 2019 Kenneth Evans
Tiknoolajiyada ka dambeysa bitcoin waxay u oggolaaneysaa macaamilada in loo fuliyo si kalsooni leh oo aamin ah, iyada oo aan loo baahnayn dhexdhexaadiye. Teknoolojiyadaani waxay ka baxeen sidii ficil ahaan loo iska indha tiri lahaa oo ay u noqdeen diiradda hal-abuurnimada bangiyada waaweyn. Khubaradu waxay qiyaaseen in adeegsiga teknoolojiyada xannibaadda ay macnaheedu noqon karto keyd dhan 20,000 oo milyan oo doolar qeybta 2022. Qaarkoodna way sii fogaanayaan oo waxay ku dhiirranayaan inay isbarbar dhigaan hal-abuurkan kan mishiinka uumiga ama mashiinka gubashada.
Maxay isticmaalka guud ee labada isbeddel ee ugu kulul adduunka tiknoolajiyadu siin karaan aadanaha? Waxaan ka hadlaynaa xannibaadda iyo Internetka waxyaabaha (IoT). Labada teknolojiyaddooduba waxay leeyihiin karti aad u weyn iskudhafkooduna waxbadan ayuu ballan qaadayaa
Sidee ayuu IoT u kobcayaa?
Jaleecada hore, labada tikniyoolajiyad wax yar ayaa ka dhexeeya. Laakiin dhinaca tikniyoolajiyadda sare, waxba suurtagal maaha. Waxaa jira in yar oo hammi leh, dadka caqliga badan ee beeraha dhaqsaha u koraya kuwaas oo diyaar u ah inay shaqeeyaan saacado dheeraad ah iyo saacad kasta si ay u helaan xalal xiiso leh isugeynta laba hal-abuurnimo.
Waxa ugu horreeya ee maskaxdaada ku soo dhaca waa amniga. Khubaro badan iyo shirkado badan ayaa aaminsan in xannibaadda ay damaanad qaadi karto aaladaha IoT amniga iyaga oo ku biiraya deegaan baahsan, oo la cabbiri karo.
IBM waxay dhowaan xiiseyneysay isticmaalka xannibaadda internetka ee waxyaabaha. Isku-darka tikniyoolajiyada ayaa kuu oggolaan doonta inaad si kalsooni leh ula socoto oo aad u diiwaangeliso taariikhda isbeddelka ee walxaha shabakadaha shaqsiyadeed iyo kooxahooda, abuurista waddooyin xisaabeed waxayna kuu oggolaaneysaa inaad qeexdo nidaamka qandaraasyada caqliga leh.
Tikniyoolajiyada xannibaadda ayaa bixin kara kaabayaal fudud oo loogu talagalay laba qalab si toos ah loogu wareejiyo qayb ka mid ah hantida, sida lacagta ama xogta, iyada oo loo marayo kala duwanaansho macaamil ganacsi oo aamin ah oo lagu kalsoonaan karo oo leh shaambad waqti ah.
IBM waxay sameysay cilmi baaris taas oo iibsadayaasha iyo khubarada la weydiiyay inay qiimeeyaan waxtarrada xannibaadda sida is-maamul, baahin, iyo tikniyoolajiyad dadweyne. Waxay noqon kartaa cunsur aasaasi u ah taageeridda xalalka ku saleysan IoT.
Mid ka mid ah kaqeybgalayaasha sahanka, la-taliyihii Hindisaha Lacagta ee MIT, Wakiilka Kooxda Agentic Michael Casey ayaa ugu yeeray xannibaadda "mashiinka runta". Dhaqaaleyahan ka tirsan MIT iyo Professor Christian Catalini ayaa ka hadlay xakameyn badan, iyagoo sheegay in xannibaadda ay u oggolaaneyso nidaamka deegaanka ee Internetka Waxyaabaha si loo yareeyo guddiyada xaqiijinta macaamilka iyo adeegsiga shabakadda.
Tani waxay khuseysaa dhammaan noocyada macaamil ganacsi, oo ay ku jiraan kuwa la xiriira IoT. Intaa waxaa dheer, heerka xakamaynta qalab kasta oo IoT ah waa la dabcin karaa. Isku darka IoT iyo xannibaadda ayaa yareyn kara halista weerarada haakarisyadu.
Shaqaalaha Dell Jason Compton wuxuu tixgeliyaa xannibaadda inay tahay "beddelka xiisaha leh" nidaamka amniga caadiga ah ee IoT. Wuxuu soo jeedinayaa in wax ka qabashada arrimaha amniga ee shabakadaha IoT ay noqon doonto dhibaato ka adag tan, tusaale ahaan, shabakad Bitcoin ah. Isku darka tiknoolajiyada xannibaadda iyo IoT waxay leedahay awood weyn oo aad u baahan karto inaad uga faa'iideysato ganacsigaaga.
Blockchain kaliya maahan amniga
Fahamka xannibaadda iyo sababta loogu tixgelinayo mid gaar ah waa mid aad muhiim u ah. Waa tiknoolajiyadda aasaasiga ah ee bitcoin, cryptocurrency-ka casriga ah. Seeraar, lafteeda, waa mid xiiso leh laakiin ma ahan dib-u-celin weyn oo ku saabsan qaabka ganacsiga ee hay'ad maaliyadeed. Isku mid maaha runta tiknoolajiyada ka dambeysa macaamil ganacsi bitcoin.
Isticmaalka tikniyoolajiyadaha diiwaangashan ee aaladaha IoT waxay u oggolaaneysaa kaliya xallinta arrimaha amniga laakiin sidoo kale waxay ku darsataa shaqooyin cusub waxayna yareyneysaa kharashka hawlgalkooda. Blockchain waa teknolojiyad la shaqeysa macaamillada waxayna siisaa isdhexgalka shabakadda. Way fiicantahay kormeerka howlaha IoT.
Tusaale ahaan, iyada oo ku saleysan xannibaadda, waxaa suurtagal ah in la taageero aqoonsiga aaladaha iyo in isdhexgalka dhexdooda ka dhigo mid aad u dhaqso badan. Isku darka tiknoolajiyada xannibaadda iyo IoT waxay leedahay awood weyn oo aad u baahan karto inaad uga faa'iideysato ganacsigaaga.
Siyaabaha loo adeegsado xannibaadda internetka waxyaabaha
Xaqiiqdii, iibiyeyaashu waxay muddo dheer ka shaqeynayeen inay dhisaan isku xirnaanta aaladaha shabakadda IoT ee ku saleysan xannibaadda. Waxaa jira 4 tilmaamood oo iyaga ka xiiso badan kuwa kale:
• Abuurista jawi lagu kalsoon yahay.
• Kharash dhimista.
• Dardar galinta isdhaafsiga xogta.
• Kordhinta amniga.
Tikniyoolajiyadda xannibaadda ayaa siin kara kaabayaal fudud laba qalab si aad si toos ah ugu wareejin karto qayb ka mid ah hantida (macluumaadka, lacagta) si ammaan ah oo aamin ah.
Tusaalooyinka isticmaalka xannibaadda shabakadda IoT
Shirkadda weyn ee Kuuriyaanka ah ee Hyundai waxay taageertaa bilowga aasaaska IoT ee loo yaqaan 'HDAC' (Hyundai Digital Asset Currency). Shirkadda dhexdeeda, tikniyoolajiyadda waxaa si gaar ah loogu habeeyay IoT-ga.
Shirkadda cusub ee Filament ayaa ku dhawaaqday soo saarista qalab loogu talagalay qalabka IoT ee warshadaha.
Tani waa in la sugo xog muhiim ah oo kaliya la wadaagi karo inta udhaxeysa aaladaha tiknoolajiyada xannibaadda.
Dabcan, horumarro badan ayaa ku jira marxalad hore. Tiro ka mid ah arrimaha amniga ayaan weli la xallin. Gaar ahaan, waxaa lagama maarmaan ah in laga shaqeeyo aasaaska sharciga ee hal-abuurnimada noocaas ah. Laakiin haddii aad tixgeliso xawaaraha ay labada suuqba ku kobcayaan, waa maxay suurtagalnimada wadajirka ah ee jira, waxaan filan karnaa in IoT, oo lagu dhisay aasaaska xannibaadda, ay tahay arrin mustaqbalka dhow. Isku darka tiknoolajiyada xannibaadda iyo IoT waxay leedahay awood weyn oo aad u baahan karto inaad uga faa'iideysato ganacsigaaga. Waa inaad la kulantaa shirkadaha horumarinta barnaamijka si loo shaqaaleeyo horumariyeyaasha xannibaadda. Waa inaad dhexgelisaa tikniyoolajiyadaan meheraddaada maanta.
Tags: internet ee waxTechnology